डाक्टरलाई प्रश्नः प्रेमिका यौनसम्पर्क गर्न मान्दिनन् के गरौं? – Everest Dainik – News from Nepal
डाक्टरलाई प्रश्नः प्रेमिका यौनसम्पर्क गर्न मान्दिनन् के गरौं?
म आफ्नी गर्लफ्रेन्डसँग अन्तरंग समबन्ध राख्न चाहन्छु, तर उनी मान्दिनन् । अब मैले के गर्नुपर्छ ?
काठमाडौं, माघ १८ । यौनआनन्द लिने तर यौनसम्पर्क राख्ने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्ने वातावरण दुवै जना मिलेर गर्नु उपुयुक्त हुन्छ । यस्ता निर्णय वा भनौं अठोट पालना गर्न नसक्दा समस्यामा परिन्छ । पहिलो यौनसम्पर्क कुनै पनि व्यक्तिका लागि एक विशेष घटना हो । दुवै जना नै शारीरिक, मानसिक अनि भावनात्क रुपमा तयार भएपछि मात्र यसमा संग्लन हुनुपर्छ । यो कुरामा जबरजस्ती गर्दा सम्बन्ध नै धरापमा पर्छ ।
यहाँ तपाइँकी प्रेमिकाले तपाइसँगको सम्बन्ध गहिनो नै भए पनि आफूलाई एक सीमाभित्र राख्न चाहनुु भएको देखिन्छ, जुन आफैंमा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो । तपाई उहाँलाई सोचो प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यसको सम्मान गर्नुहोस् र उहाँ तयार नभएसम्म आनावश्यक रुपमा दबाब नदिनुहोस् । यो प्रश्नको जवाफ डा. राजेन्द्र भद्राले दिएका हुन् । यो सामग्री कान्तिपुर साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।